U.N. medics see evidence of rape in Myanmar army 'cleansing' campaign – CRM
COX‘S BAZAR, Bangladesh (Reuters) – Doctors treating some of the 429,000 Rohingya Muslims who have fled to Bangladesh from Myanmar in recent weeks have seen dozens of women with injuries consistent with violent sexual attacks, U.N. clinicians and other health workers said.
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ဟာ မသိကျိုးကျွံပြုနေကြတယ်လို့ ဗြိတိန် အခြေစိုက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ AI က ဝေဖန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒ်ါအောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်းကို အစိုးရ သတင်းမီဒီယာတွေကနေ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် အပြီးမှာ အခုလို ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီး ဝေဖန်လိုက်တာပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မြန်မာအစိုးရဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာ အဖြစ်အပျက်တွေကို မသိကျိုးကျွံပြု ခေါင်းရှောင်နေကြကြောင်း၊ မိန့်ခွန်းထဲမှာ မမှန်ကန်တဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ နစ်နာထိခိုက်ရသူတွေကို အပြစ်တင်တာတွေ မကြာခဏ ပါဝင်နေကြောင်းလည်း AI ရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ထောက်ပြထားပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရက နိုင်ငံတကာ စိစစ်မှုတွေကို မကြောက်ပါဘူးလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောလိုက်တာဟာလည်း နက်နဲမှုမရှိကြောင်း၊ အမှန်တကယ် ဖုံးကွယ်ထားစရာ မရှိဘူးဆိုရင် ကုလသမဂ္ဂ […]
Posted on September 1, 2017 Author swelsone
ANKARA (Reuters) – Turkish President Tayyip Erdogan said on Friday that the death of hundreds of Rohingya in Myanmar over the past week constitutedagenocide aimed at Muslim communities in the region. Nearly 400 people have died in fighting that has rocked Myanmar’s northwest foraweek, new official data showed, making it probably […]
Posted on December 3, 2016 Author rightsforburma rightsforburma